Hagamtaa jijjiiruu fi Goodayyaawwan Siqsuu, Wantawwan Gabatee Furtuu waliin
Wantawwan, gabatee furtuu waliin, hagamtaa jijjiiruu fi goodayyaawwan filataman siqsuu nidandeessa.
Goodayyaa yk wanta filatame tokko siqsuudhaaf, furtuu xiyya dhiibi. Pikselii tokkoon siqsuuf, OptionAlt gad dhiibitii, kana booda furtuu xiyyichaa dhiibi.
Goodayyaa yk wanta filatame tokko siqsuudhaaf, jalqaba Ctrl+Tab dhiibi. Yammuu kana qabannoo keessaa tokko akka filatame mul'isuuf liphata. Qabannoo kabiiroo filachuudhaaf, Ctrl+Tab dabalii dhiibi. Wanta kutaa tarsaa tokkoon hagamtaa jijjiiruudhaaf, furtuu xiyyaa dhiibi. Pikselii tokkoon hagamtaa jijjiiruudhaaf, Dirqala Altgad dhiibitii, kana booda furtuu xiyyichaa dhiibi.
Title is: Hagamtaa jijjiiruu fi Goodayyaawwan Siqsuu, Wantawwan Gabatee Furtuu waliin